ShweMinThar: မိနျးမလြာအခှငျ့အရေး Gays Right နှငျ့ နိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုးရေး ဆကျစပျပုံ
မိနျးမလြာအခှငျ့အရေး Gays Right နှငျ့ နိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုးရေး ဆကျစပျပုံ
(လူဆိုတာ လူတဈယောကျရဲ့ အခှငျ့အရေးနဲ့ ရပိုငျခှငျ့၊လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို တနျးတူညီမြှရရှိသငျ့တယျဆိုတဲ့ အယူအဆကို လူအတျော များများက လကျခံပါရဲ့လား။ အထူးသဖွငျ့ လိငျစိတျတိမျးညှတျမှုမတူ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ လူတှအေတှကျဆိုရငျရော အထကျပါအယူအဆ ကို ထညျ့သှငျ့စဉျးစားပါ့မလား။ လူကို လူလို့မွငျစခေငျြတယျ၊ မတူကှဲပွားမှုကို လကျခံစခေငျြတယျ။ မိနျးမလြာမြားရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ကိစ်စက နိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုးရေးနဲ့ ဘယျလိုမြားသကျဆိုငျနပေါလိမျ့လို့ အတှေးဝငျသူမြား ဖတျရှုရအောငျ ဆောငျးပါးတဈစောငျကို ဝေငှလိုကျပါတယျ။ ဖတျကွညျ့ပါ။)
လှနျခဲ့သော နှဈနှဈခနျ့က အသကျ ၁၇နှဈနှငျ့ ၁၅နှဈအရှယျအသီးသီးရှိကွသော ကြှနျတျော၏ သမီးနှဈယောကျသညျ သူတို့၏ အဒျေါဖွဈသူ ထိုငျးနိုငျငံသို့ ဘုရားဖူးသှားရာတှငျ အဖျောအဖွဈ ဘနျကောကျမွို့သို့လိုကျသှားကွပါသညျ။ ပွနျလာတော့ သမီးကွီးက ကြှနျတေျာ့အတှကျဆို ကာ ဘနျကောကျမှဝယျလာသော တီရှပျသုံးထညျ လကျဆောငျပေးသညျ။ ငယျငယျကတညျးက ဖအနေားအလှနျကပျပွီး ဖအကေိုလညျး စနောကျတတျသညျ့ သမီးငယ်ကတော့ ဖဖေကွေီးအတှကျ သမီးလညျးလကျဆောငျဝယျလာတယျဟုပွောရာ ကြှနျတျောက ဟုတ်လားသမီး ဟု အလိုကျသငျ့ပွနျပွောတော့ သူမက သမီးဝယျလာတဲ့လကျဆောငျက ဖဖေအေ့ကွိုကျဟု ထပျ၍ကှနျ့ပါသညျ။ ဘာမြားလဲသမီးရဲ့ ဟု မေးတော့ သမီးက ရော့ ဖကွေီး၊ ဖကွေီးအကွိုကျလေးတှေ ဟုပွောပွီး ဓာတျပုံတဈပုံကို ထုတျပေးပါတော့သညျ။ ကြှနျတျောက ဓာတျပုံကိုကွညျ့လိုကျတော့ အောငျမလေးဟဲ့ဟုပငျ ပါးစပ်က ယောငျ၍ထှကျသှားပါသညျ။
ဓာတျပုံထဲမှာက ရကေူးဝတျစုံနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျအလှကို အထူးပွုထားသညျ့ အလှနျခြောသော မိနျးကလေးငါးယောကျလောကျ စငျပျေါတကျ၍ သီခငျြးဆိုနသေညျ့ပုံ ဖွဈပါသညျ။ ၄ငျးမိနျးကလေးမြားသညျ မကျြနှာရော၊ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျရော၊ ကိုယျဟနျအနအေထားရော ပွောစရာ မရှိအောငျလှသညျ။ ခွောကျပွဈကငျး သဲလငျစငျအလှဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ ကြှနျတေျာ့ပါးစပျက အောငျမလေးဟဲ့ဟု ယောငျ၍ အသံထွက်သွား ခွငျးမှာ သူတို့၏အလှကို ရငျဖိုသှား၍ဟု စာဖတျသူတို့ အထငျမလှဲစလေိုပါ။ ကြှနျတျော၏ အသကျအရှယျသညျ ရငျခုနျရမညျ့အရှယျမဟုတျ။ ၁၅နှဈသမီးက ဖအကေို ဒီလိုပုံမြိုးလကျဆောငျပေးတော့ လနျ့သှားတာပါ။ နောကျစရာရှားလို့ ကိုယျ့ဖအကေို သညျလိုနောကျရသလားဆိုပွီး သမီးငယ်ကို ဆုံးမလိုကျရသေးသညျ။ သမီးငယ်က ဆကျ၍ပွောသညျမှာ ဖကွေီး၊ သူတို့က ယောကျြားဘ၀ကနေ ခှဲစိတျခံပွီး မိနျးမဘ၀ကို ပွောငျးထားတာဟု ပွောပွပါသညျ။ ပွီးတော့
သူတို့က ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ၊ သူတို့ခှဲစိတျခဲ့ပွီး လိငျပွောငျးထားတာလို့လညျး ပွောငျပွောငျတငျးတငျးပွောတယျ။ ဓာတျပုံလညျး အရိုကျခံ တယျ။ သူတို့ရဲ့ဘ၀မှနျကို ဘယျသူဘာပွောပွော သူတို့က ပွဿနာမရှိဘူး။ ပတျဝနျးကငျြနဲ့လညျး ပွဿနာမရှိဘူး ဟု သမီးငယ်က ကလေးတဈဦးအနနှေငျ့ သူသိသလောကျ တိုတိုတုတျတုတျပွောလိုကျသျောလညျး သူ့စကားအရ ထိုငျးနိုငျငံ၏ ကနျြးမာရေးအခွအေနေ အဆငျ့အတနျးတဈခုကို ခကျြခငျြး ကြှနျတျောအကဲခတျလိုကျမိသညျ။
ဘယ်လိုအကဲခတ်လိုက်တာလဲ ရှငျးပွပါမညျ။ ကမျဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးက ကနျြးမာရေး(Health)ကို အဓိပ်ပာယျသတျမှတျသညျမှာ ကနျြးမာခွငျးဟူသညျမှာ ရောဂါကငျးရှငျးနရေုံသာမဟုတျ၊ ကိုယျ၏ ကနျြးမာခွငျး(ကာယသုခ)၊ စိတျ၏ခမျြးသာခွငျး(စိတ်တသုခ)တို့အပွငျ လူမှုရေးသုခနှငျ့ပွညျ့စုံနခွေငျးဖွဈသညျ။ဟုဆိုပါသညျ။ ဒီတော့ ယောကျြားဘ၀နှငျ့ မိနျးမစိတျပေါကျနသေူတဈယောကျကို မွငျယောငျကွညျ့ပါ။
သူ့မှာ ရောဂါကငျးရှငျးနမေယျဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရငျ ကာယသုခတော့ရှိပါမယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖွဈခငျြတဲ့မိနျးမဘ၀ကို တကယျမဖွဈရရှာဘူး။ ဒီတော့ စိတျမခမျြးသာဘူး။ ဒီတော့ စိတ်တသုခနဲ့ မပွညျ့စုံဘူး။ ဒါတငျဘယျကမလဲ ပတျဝနျးကငျြကလညျး သိပျပွီးအဖကျမလုပျဘူး၊ မိနျးမလြာ (ဘနျးစကားနဲ့ ဆိုရငျ အခွောကျ)ဆိုပွီး ပဈပယျထားမယျ။ ဒီတော့ လူမှုရေးသုခနဲ့ မပွညျ့စုံတော့ဘူး။ ကမျဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့(WHO)ရဲ့ သတျမှတျခကျြနဲ့ ခြိနျထိုးကွညျ့ရငျ ကာယသုခပဲပွညျ့စုံတယျ။ စိတ်တသုခနဲ့ လူမှုရေးသုခ မပွညျ့စုံဘူး။ ဒီတော့ မိနျးမလြာတှကေို မကနျြးမာကွရှာဘူးဟု ပွောနိုငျပါတယျ။ လူတှနေားလညျတဲ့ ကနျြးမာခွငျးဆိုတာကလညျး ရောဂါ ရှိမရှိဆိုတဲ့ ပတေံနဲ့ပဲ တိုငျးတာကိုး။ လူရာဝငျမ၀ငျ၊ လူဝငျဆံ့မဆံ့ဆိုတဲ့ အခကျြလညျးပါသေးတယျဆိုတာ လူတှသေိပျမသိကွပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကြှနျတေျာ့သမီးငယျတှခေဲ့တဲ့ စငျပျေါတကျပွီး သီခငျြးဆိုနတေဲ့ ရကေူးဝတျစုံဝတျ၍ ကျားဘ၀မှ မဘ၀သို့ ပွောငျးထား ကွသူမြားကတော့ သိပျလှပွီး မွငျသူငေးနရေတယျ။ ရောဂါမရှိဘူး။ ဒီတော့ ကာယသုခနဲ့ ပွညျ့စုံနပွေီး ခှဲစိတျလိငျပွောငျးထားလို့ ဖွဈခငျြသလို ဖွဈလာရပွီဆိုတော့ စိတျခမျြးသာပွီပေါ့။ ဒီတော့ စိတ်တသုခနဲ့ပွညျ့စုံပွီး သူတို့က သူတို့အကွောငျးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပတျဝနျးကငျြမှာ ခပြွရဲတယျ။ ပတျဝနျးကငျြနဲ့လညျး ပွဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ လူမှုရေးသုခနဲ့လညျး ပွညျ့စုံပွီပေါ့။ ဒီတော့ သူတို့ကနျြးမာကွသညျ။ ဒီလို ကနျြးမာရေးအနေ အထားတဈခုကိုရောကျဖို့ ပတျဝနျးကငျြ၏ နားလညျပေးမှု Understanding နဲ့လညျးဆိုငျတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ Development status of social environment (ချေါ) လူမှုပတျဝနျးကငျြ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနဲ့လညျး ဆိုငျပါသညျ။
ဥပမာတဈခုပွောရသျော အကယျ၍ လူတဈဦးကို သူ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြက ၀ိုငျးပယျလာတယျဆိုပါစို့။ ကမျဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့၏ အဓိပ်ပာယျ သတျမှတျခကျြအရ သူဟာ ကနျြးမာသူမဟုတျပါဘူး။ ၉၆ပါး ရောဂါဝေဒနာကငျးစငျနသေျောလညျး လူမှုရေးသုခ သူ့မှာ မပွညျ့စုံပါ။ ထို့အပွငျ သူ့ကိုဝိုငျးပယျထားသော ပတျဝနျးကငျြသညျလညျး ဖှံ့ဖွိုးရေးအဆငျ့အတနျးမွငျ့နသေညျ့ Development Status ဟုမဆိုသာပါ။ စာနာစိတျ နညျးနသေေးသညျဟု ဆိုနိုငျပါ၏။
ဘနျကောကျမွို့မှ ပွနျလာတဲ့ ၁၅နှဈအရှယျ ကြှနျတေျာ့သမီးက ဘနျကောကျမှာ ယောကျြားဘ၀မှ မိနျးမဘ၀သို့ ခှဲစိတျလိငျပွောငျးထား သူတှေ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ ပွဿနာမရှိဘူး။ ပတျဝနျးကငျြမှာ မသိမျငယျရဘူးဆိုတော့ အဲဒီပတျဝနျးကငျြရဲ့ Development ဟာ မွငျ့မားနပွေီဟု ကောကျခကျြခမြိပါသညျ။
မကွာသေးမီက ဂြာနယျတဈစောငျတှငျ နိုငျငံခွားတိုငျးပွညျတဈခုမှာ ကျားဘ၀မှ မဘ၀သို့ ခှဲစိတျလိငျပွောငျးသော ဦးရအေရအေတှကျ အလှနျမြားနပေါသညျဟု ရေးခဲ့ရာ စာဖတျသူတခြို့က ပွဿနာတှတေော့ မြားကုနျပါပွီဟု စုတျသပျနကွေသညျကို တှခေဲ့ဖူးပါသညျ။ တကယျတော့ ကျားဘ၀ကနေ ခှဲစိတျလိငျပွောငျးလိုကျသော အရအေတှကျ မြားလာခွငျးသညျ ပွဿနာမြားလာခွငျး မဟုတျ။ ပွဿနာ ဖွရှေငျးခွငျးမြားသာဖွဈ၏။
Problem မြားခွငျးမဟုတျ၊ Problem Solution မြားလာခွငျးဖွဈပါသညျ။ ခှဲစိတျလိငျမပွောငျးဘဲ ဒီအတိုငျးထားတော့ကော ၄ငျးပုဂ်ဂိုလျ တို့သညျ ယောကျြားစိတျပွနျပေါကျမှာတဲ့လား။ ယောကျြားစိတျပွနျမပေါကျသညျ့အပွငျ ယောကျြားအင်ျဂါနှငျ့ မိနျးမစိတျဖွဈနပွေီး ပွဿနာမြားတော့၏။ ပွဿနာကတော့ လိငျတူ ဆကျဆံခွငျး (Homo Sex) နှငျ့ လူမှုရေးပွဿနာအမြိုးမြိုးဖွဈ၏။ ၄ငျးတို့ကို M.S.M (Men who have Sex with Men) ဟုချေါပါ၏။ M.S.M တို့၌ HIV ကူးစကျမှုအန်တရာယျလညျး မွငျ့မားနတေတျပါသညျ။
ကြှနျတျောသညျ HIV ကာကှယျရေးစီမံကိနျး၌ တာဝနျထမျးဆောငျဖူးသဖွငျ့ M.S.M ပေါငျးမြားစှာနှငျ့ ခငျမငျရငျးနှီး အသိအကြှမျးဖွဈခဲ့ဖူး ပါသညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ၄ငျး M.S.M တို့သညျ အပယျခံမြားဖွဈကွပါသညျ။ အနညျးဆုံးတော့ သူတို့ကို ဟားစရာဟု ယူဆကွပါသညျ။ တခြို့ကတော့ ကမျဘာပျေါတှငျ HIV ကူးစကျနှုနျးမွငျ့မားအောငျ လုပျသူတှထေဲမှာ သူတို့လညျးပါတယျဟု အပွဈတငျတတျကွပါသညျ။ မွနျမာနိုငျငံမှ M.S.M မြားတှငျ တခြို့မှာ ခမျြးသာပွီး ကံထူးကွပါသညျ။ ဘာကွာငျ့လဲဆိုတော့ ထိုငျးနိုငျငံသို့ ကြှနျတျောသိရသလောကျ ဘုရားဖူးလိုလိုသှားပွီး ခှဲစိတျလိငျပွောငျးခဲ့ကွပါသညျ။ ဒီတော့ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ဘ၀ကို ကိုယျရောကျရပွီး အတိုငျးအတာတဈခုအထိတော့ စိတျခမျြးသာရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လုံးလုံးလြားလြားတော့ မပျော်ရဲပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ငါတော့ မိနျးမလုံးလုံးဖွဈပွီဟလေို့ မကွညောရဲပါ။ မိမိရဲ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ဘ၀ကို ပတျဝနျးကငျြသို့ ပျေါပျေါတငျတငျ အသိမပေးရဲတာ ကြှနျတျောတို့ အသိမိတျဆှထေဲတှငျ ရှိပါသညျ။
တခြို့က ပွောကွပွနျပါသညျ။ ကျား ဘ၀မှ မဘ၀သို့ ခှဲစိတျလိငျပွောငျးခွငျးသညျ ဥပဒေအရ ပွဈမှုမွောကျသညျဟု ဆိုကွပွနျ၍ အပယ်ခံ M.S.M တို့ခမြာ သှေးလနျ့ကွရှာပါသညျ။ တပျလိုကျတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မက အကွီးကွီးမှ တကယျ့ကို အကွီးကွီးပါ။ မွနျမာနိုငျငံ ရာဇသတျကွီးချေါ ပွဈမှုဥပဒေ ၃၂၆တှငျ လူတဈဦး၏ ကိုယျအင်ျဂါတဈခုခုကို ပကျြစီးစလြှေငျ ကြှနျးဒဏျအထိ ပွဋ်ဌာနျးထားပါသညျ။ ဒီတော့ ယောကျြားလိငျအင်ျဂါ ကွီးကို ခှဲစိတျဖွတျတောကျလိုကျတော့ ကိုယျအင်ျဂါတဈခုကို ဖကျြဆီးလိုကျတာပဲဆိုပွီး ဒီပုဒျမကွီးတပျလိုကျတော့ သှေးပကျြကုနျကွရှာပါသညျ။
#ကိုယျအင်ျဂါကို ပကျြစီးစခွေငျးလား၊ ဆေးကုသခွငျးလား
လူတဈဦးနဲ့တဈဦး ရနျဖွဈ၍ ဒေါသအလြှောကျ ဓားနှငျ့ခုတျလိုကျ၍ တစ်ဖက်လူ လကျပွတျသှားသျော ကိုယျအင်ျဂါပကျြစီး၍ ဒုက်ခိတဖွဈသှား သဖွငျ့ ပွဈမှုဥပဒပုဒျမ ၃၂၆နှငျ့ အကြုံးဝငျပါသညျ။ သို့သျော ဆီးခြိုလူနာတဈယောကျ ဆီးခြိုအလှနျပွငျးထနျပွီး ခွောကျထောကျအနာဖွဈ၍ ခွထေောကျပုပျသဖွငျ့ အသကျအန်တရာယျရှိ၍ ဆရာဝန်က ၄ငျးခွထေောကျကို ဖွတျရသျော ဒီကိစ်စက ကိုယျအင်ျဂါကို ပကျြစီးစခွေငျးဟု အဓိပ်ပာယျမမှတျဘဲ ဆေးကုသခွငျးဟု အဓိပ်ပာယျသတျမှတျ၍ ပုဒ်မ ၃၂၆နှငျ့ အကြုံးမ၀ငျပွနျပါ။
ဒီတော့ M.S.M တဈယောကျရဲ့ လိငျအင်ျဂါကို ဖွတျတောကျ လိငျပွောငျးရာ၌ ဤကိစ်စသညျ ဆေးကုသပေးခွငျးဖွဈပါသညျဟု လြှောကျလဲနိုငျ ပါသညျ။ တကယျတော့ ခှဲစိတျလိငျပွောငျးထားခွငျးကို တားမွဈသော အထူးဥပဒမရှိသလို ခှငျ့ပွုထားသာ ပွဋ်ဌာနျးခကျြလညျး မရှိပါ။ ဤအမှုကိစ်စမြိုးကို တိုငျကွား တရားစှဲဖူးခွငျးမရှိ၍ စီရငျထုံးလညျး မရှိသေးပါ။
တခြို့သော ဥပဒေရေးရာ အငွငျးပှားမှုမြားတှငျ ကိုးကားစရာ ဥပဒရှောမတှဘေဲ့ စီရငျထုံးမြားကို ကိုးကားရပါသညျ။ စီရငျထုံးဆိုသညျမှာ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးဖွဈသော တရားရုံးခြုပျ၏ စုံညီစုံရုံးကာ ဆုံးဖွတျပေးဖူးသော အမှုတဈခု၏ ဆုံးဖွတျပုံ (ဝါ) ဖွတျထုံး (ဝါ) စီရငျထုံးဖွဈပွီး အောကျတရားရုံးအားလုံးက လိုကျနာပါသညျ။ ဥပမာ - မွနျမာလငျမယားတို့၌ လငျက မယားကို ကွိမျဖနျမြားစှာ ပါးရိုကျသျော လညျး မယားကို ကှာရှငျးခှငျ့ပွုရမညျဟု အတိအလငျး တိတိကကြပြွဋ်ဌာနျးခကျြမရှိ၍ ပါးရိုကျခံရသောမယားက တရားရုံးတှငျ လငျမယားကှာ ရှငျးခှငျ့တောငျးသျော တရားရုံးအမြိုးမြိုး၌ မတူညီသော စီရငျခကျြအမြိုးမြိုး ဖွဈပျေါနိုငျပါသညျ။ သို့သျော ၁၉၆၈ ၌ ၁၉၆၈ တရားမ ပထမ အယူခံမှု အမှတျ ၁ တှငျ ဦးမြိုးမွငျ့နှငျ့ ဒေါကျတာခငျမကွေညျ စီရငျထုံး၌ လငျမယားကှာရှငျးခှငျ့ပေးခဲ့ပွီး စီရငျထုံးအဖွဈ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ထိုစီရငျထုံးကို ကိုးကား၍ နောကျအခါ လငျမယား ပါးရိုကျမှုဖွဈသျော အောကျရုံးအားလုံးက စီရငျထုံးကို လိုက်နာ၍ ကှာရှငျးခှငျ့ပေးရသညျ။ ဒါက စီရငျထုံး ဥပမာတစ်ခုပါ။
သို့သျော M.S.M တို့လိငျပွောငျးခွငျး၌ ယနတေို့ငျ အမှုမဖွဈသေးသဖွငျ့ စီရငျထုံးလညျး မရှိသေးပါ။ M.S.M တဈယောကျ ခှဲစိတျဖွတျတောကျ ၍ လိငျပွောငျးသျော ဥပဒေအရ တကယျပငျ မိနျးမဖွဈသှားပွီလား။ ဥပမာ - လိငျပွောငျးလိုကျသော M.S.M ဘ၀ကလာသူသညျ ယောကျြား တဈယောကျကို တရားဝငျလကျထပျခှငျ့ ရှိ မရှိဟူသော ဥပဒပွေဿနာမြိုးရှိပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံတှငျ ဤကိစ်စမြိုး၌လညျး စီရငျထုံး မရှိသေးပါ။
အပယျခံရသူတို့မှာ ဥပမာတခြို့ကတော့ လိငျတူဆကျဆံသူမြား၊ ပွညျ့တနျဆာမြား၊ အနာကွီးဝေဒနာသညျ၊ AIDS ဝေဒနာသညျ စသညျဖွငျ့ ဖွဈကွပါသညျ။
တဈခါက WHO မှ HIV ပိုးရှိသူများကို စာနာကွညျဖွူလကျတှဲကူရနျ ဆောငျပုဒျထုတျပွနျခဲ့ဖူးပါသညျ။ စာနာကွညျဖွူကွခွငျးသညျ Acceptance ပငျဖွဈပါသညျ။ လူမှုရေးအားနညျးခကျြရှိသူမြားအား ၀ိုငျးပယျသော ပတျဝနျးကငျြသညျ ဖှံ့ဖွိုးမှု နောကျကနြသေေးပွီး စာနာကွညျဖွူလကျသငျ့ခံသော ပတျဝနျးကငျြသညျ ဖှံ့ဖွိုးမှု ခွတေဈလှမျးတိုးလာသညျဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ ဖှံ့ဖွိုးပွီးဖွဈသော လူမှုရေးအဆောကျအအုံတဈခုတှငျ လူမှုရေးအားနညျးသူမြားကို ပွဈပယျလှောငျပွောငျခွငျး၊ ၀ိုငျး၍ ဟားခွငျးမရှိတော့ပါ။
မကွာသေးမီက ကြှနျတျောတို့နိုငျငံတှငျ ရုပျရှငျမငျးသားငယျလေးတဈယောကျ လကျထပျတော့ သူ၏ သတို့သမီးအား ကျား မှ မ သို့ ဘ၀ပွောငျးထားသူပါဟု တဈစုံတဈယောကျက သတငျးလှငျ့ခဲ့သညျ။ တခြို့က ဟားသညျ။ ဒါပမေဲ့ တကယျမဟုတျတော့ ဟားလို့ မရတော့ဘူး။ သို့သျော တကယျဟုတျနကွေတဲ့ M.S.M တှခေမြာ ဘယျလောကျအဟားခံနကွေရရှာမလဲ။
တခြို့က M.S.M မြားနှငျ့ ပွညျ့တနျဆာမြားသညျ HIV/AIDS ပွနျ့ပှားရေး၌ တရားခံစာရငျးတှငျ ပါဝငျသညျဆိုပွီး ၄ငျးတို့ကို အပွဈတငျရှုတျခြ ကွပါသညျ။ ဤသို့ အပွဈတငျခွငျးသညျ HIV/AIDS ကာကှယျရေး၏ မှနျကနျသောနညျးလမျး(Right Method) မဟုတျပါ။ သူတို့အား စညျးခွားထားသော လူမှုရေးအတားအဆီး (Social Barrier) အားနညျးပါးစလေကျြ ကာကှယျရေးနညျးလမျးမြား (ဥပမာ-ကှနျဒုံး စသညျဖွငျ့)ကို အလေ့အထ အလအေ့ကငျြ့ဖွဈစခွေငျးဖွငျ့သာ HIV/AIDS ကို တားဆီးရပါမညျ။
Development isaChange towards positive directions. ဟု ဆိုပါသညျ။ ဖှံ့ဖွိုးခွငျးသညျ ကောငျးသောဘကျကို ပွောငျးလဲခွငျးဖွဈ ပါသညျ။ တခြို့က အာကာသယာဉျစီး၍ ကမျဘာတျပတျမှ ဖှံ့ဖွိုးခွငျးဟု ထငျကွပါသညျ။ တကယျ့ဖှံ့ဖွိုးခွငျးသညျ အခနျးကဏ်ဏ္ဍ Sector များစွာ ရှိပါသညျ။အာကာသယာဉျစီး၍ ကမျဘာပတျနိုငျခွငျးသညျ သိပ်ပံနညျးပညာကဏ်ဏ္ဍ ဖှံ့ဖွိုးခွငျးသာဖွဈပွီး ပိုမိုအရေးကွီးသညျမှာ လူမှုရေးကဏ်ဏ္ဍမြား Social Sector မြားပါဝငျသညျ။
အပယျခံမြားအတှကျ စာနာလကျခံလုပျပေးနိုငျခွငျးသညျလညျး ဖှံ့ဖွိုးခွငျးပငျဖွဈပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့သညျ လောလောဆယျအခိုကျအတနျ့ မှာ လကမျဘာသို့ ဒုံးပြံစီး၍ မသှားကွသေးပါ။ သို့သျော M.S.M တို့၊ ပွညျ့တနျဆာတို့အတှကျတော့ စာနာသော ပတျဝနျးကငျြကို ဖနျတီးနိုငျစှမျး ရှိကွသညျ။ ယနပေ့ငျ ဖနျတီးနိုငျသညျဟု ဆိုခငျြပါသညျ။ ထို့ကွေျာ့ ယနပေ့ငျ ဖှံ့ဖွိုးနိုငျသညျ။
နားလညျမှု၊ လေးစားမှုမြားပေးလြှငျ အပွနျအလှနျ လေးစားမှုရှိကွပမေညျ။ ကနျြးမာရေးအဆငျ့အတနျး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေးအဆငျ့အတနျး တိုးတကျ လာမညျဟု ဆိုနိုငျပါ၏။
ရေးသားသူ - ဒေါကျတာ ထှနျးဝငျး
*** ဒေါကျတာထှနျးဝငျး - လိငျနှငျ့ ကြားမဆိုငျရာနိုငျငံရေး (Sex and Gender Politics) စာအုပျရဲ့ စာမကျြနှာ ၁၃ပါဆောငျးပါး။
မွနျမာ့ဓလထေုံ့းတမျးဥပဒေ (ဦးမွစိနျ၊ ဗဟိုတရားရုံးရှနေ့ေ)
အအေိုငျဒီအကျဈ ကာကှယျရေးနှငျ့ သကျဆိုငျရာဥပဒမြေား (ဒေါကျတာထှနျးဝငျး)
မိန်းမလျာအခွင့်အရေး Gay’s Right နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆက်စပ်ပုံ
(လူဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တန်းတူညီမျှရရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လူအတော် များများက လက်ခံပါရဲ့လား။ အထူးသဖြင့် လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုမတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူတွေအတွက်ဆိုရင်ရော အထက်ပါအယူအဆ ကို ထည့်သွင့်စဉ်းစားပါ့မလား။ လူကို လူလို့မြင်စေချင်တယ်၊ မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံစေချင်တယ်။ မိန်းမလျာများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စက နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဘယ်လိုများသက်ဆိုင်နေပါလိမ့်လို့ အတွေးဝင်သူများ ဖတ်ရှုရအောင် ဆောင်းပါးတစ်စောင်ကို ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။)
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က အသက် ၁၇နှစ်နှင့် ၁၅နှစ်အရွယ်အသီးသီးရှိကြသော ကျွန်တော်၏ သမီးနှစ်ယောက်သည် သူတို့၏ အဒေါ်ဖြစ်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဘုရားဖူးသွားရာတွင် အဖော်အဖြစ် ဘန်ကောက်မြို့သို့လိုက်သွားကြပါသည်။ ပြန်လာတော့ သမီးကြီးက ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ကာ ဘန်ကောက်မှဝယ်လာသော တီရှပ်သုံးထည် လက်ဆောင်ပေးသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖအေနားအလွန်ကပ်ပြီး ဖအေကိုလည်း စနောက်တတ်သည့် သမီးငယ်ကတော့ “ဖေဖေကြီးအတွက် သမီးလည်းလက်ဆောင်ဝယ်လာတယ်”ဟုပြောရာ ကျွန်တော်က ဟုတ်လားသမီး ဟု အလိုက်သင့်ပြန်ပြောတော့ သူမက “သမီးဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်က ဖေဖေ့အကြိုက်’ဟု ထပ်၍ကွန့်ပါသည်။ “ဘာများလဲသမီးရဲ့” ဟု မေးတော့ သမီးက “ရော့ ဖေကြီး၊ ဖေကြီးအကြိုက်လေးတွေ” ဟုပြောပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ထုတ်ပေးပါတော့သည်။ ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ “အောင်မလေးဟဲ့”ဟုပင် ပါးစပ်က ယောင်၍ထွက်သွားပါသည်။
ဓာတ်ပုံထဲမှာက ရေကူးဝတ်စုံနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလှကို အထူးပြုထားသည့် အလွန်ချောသော မိန်းကလေးငါးယောက်လောက် စင်ပေါ်တက်၍ သီချင်းဆိုနေသည့်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမိန်းကလေးများသည် မျက်နှာရော၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထားရော ပြောစရာ မရှိအောင်လှသည်။ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလင်စင်အလှဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က “အောင်မလေးဟဲ့”ဟု ယောင်၍ အသံထွက်သွား ခြင်းမှာ သူတို့၏အလှကို ရင်ဖိုသွား၍ဟု စာဖတ်သူတို့ အထင်မလွဲစေလိုပါ။ ကျွန်တော်၏ အသက်အရွယ်သည် ရင်ခုန်ရမည့်အရွယ်မဟုတ်။ ၁၅နှစ်သမီးက ဖအေကို ဒီလိုပုံမျိုးလက်ဆောင်ပေးတော့ လန့်သွားတာပါ။ နောက်စရာရှားလို့ ကိုယ့်ဖအေကို သည်လိုနောက်ရသလားဆိုပြီး သမီးငယ်ကို ဆုံးမလိုက်ရသေးသည်။ သမီးငယ်က ဆက်၍ပြောသည်မှာ “ဖေကြီး၊ သူတို့က ယောက်ျားဘ၀ကနေ ခွဲစိတ်ခံပြီး မိန်းမဘ၀ကို ပြောင်းထားတာ”ဟု ပြောပြပါသည်။ ပြီးတော့
“သူတို့က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ၊ သူတို့ခွဲစိတ်ခဲ့ပြီး လိင်ပြောင်းထားတာလို့လည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောတယ်။ ဓာတ်ပုံလည်း အရိုက်ခံ တယ်။ သူတို့ရဲ့ဘ၀မှန်ကို ဘယ်သူဘာပြောပြော သူတို့က ပြဿနာမရှိဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ပြဿနာမရှိဘူး” ဟု သမီးငယ်က ကလေးတစ်ဦးအနေနှင့် သူသိသလောက် တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောလိုက်သော်လည်း သူ့စကားအရ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ချက်ချင်း ကျွန်တော်အကဲခတ်လိုက်မိသည်။
ဘယ်လိုအကဲခတ်လိုက်တာလဲ ရှင်းပြပါမည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကျန်းမာရေး(Health)ကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်သည်မှာ “ကျန်းမာခြင်းဟူသည်မှာ ရောဂါကင်းရှင်းနေရုံသာမဟုတ်၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း(ကာယသုခ)၊ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း(စိတ္တသုခ)တို့အပြင် လူမှုရေးသုခနှင့်ပြည့်စုံနေခြင်းဖြစ်သည်။”ဟုဆိုပါသည်။ ဒီတော့ ယောက်ျားဘ၀နှင့် မိန်းမစိတ်ပေါက်နေသူတစ်ယောက်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သူ့မှာ ရောဂါကင်းရှင်းနေမယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် ကာယသုခတော့ရှိပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့မိန်းမဘ၀ကို တကယ်မဖြစ်ရရှာဘူး။ ဒီတော့ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ ဒီတော့ စိတ္တသုခနဲ့ မပြည့်စုံဘူး။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သိပ်ပြီးအဖက်မလုပ်ဘူး၊ မိန်းမလျာ (ဘန်းစကားနဲ့ ဆိုရင် အခြောက်)ဆိုပြီး ပစ်ပယ်ထားမယ်။ ဒီတော့ လူမှုရေးသုခနဲ့ မပြည့်စုံတော့ဘူး။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် ကာယသုခပဲပြည့်စုံတယ်။ စိတ္တသုခနဲ့ လူမှုရေးသုခ မပြည့်စုံဘူး။ ဒီတော့ မိန်းမလျာတွေကို မကျန်းမာကြရှာဘူးဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူတွေနားလည်တဲ့ ကျန်းမာခြင်းဆိုတာကလည်း ရောဂါ ရှိမရှိဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ပဲ တိုင်းတာကိုး။ လူရာဝင်မ၀င်၊ လူဝင်ဆံ့မဆံ့ဆိုတဲ့ အချက်လည်းပါသေးတယ်ဆိုတာ လူတွေသိပ်မသိကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော့်သမီးငယ်တွေ့ခဲ့တဲ့ စင်ပေါ်တက်ပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်၍ ‘ကျား’ဘ၀မှ ‘မ’ဘ၀သို့ ပြောင်းထား ကြသူများကတော့ သိပ်လှပြီး မြင်သူငေးနေရတယ်။ ရောဂါမရှိဘူး။ ဒီတော့ ကာယသုခနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီး ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းထားလို့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လာရပြီဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာပြီပေါ့။ ဒီတော့ စိတ္တသုခနဲ့ပြည့်စုံပြီး သူတို့က သူတို့အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ချပြရဲတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ လူမှုရေးသုခနဲ့လည်း ပြည့်စုံပြီပေါ့။ ဒီတော့ သူတို့ကျန်းမာကြသည်။ ဒီလို ကျန်းမာရေးအနေ အထားတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်၏ နားလည်ပေးမှု Understanding နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Development status of social environment (ခေါ်) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့လည်း ဆိုင်ပါသည်။
ဥပမာတစ်ခုပြောရသော် အကယ်၍ လူတစ်ဦးကို သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ၀ိုင်းပယ်လာတယ်ဆိုပါစို့။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်အရ သူဟာ ကျန်းမာသူမဟုတ်ပါဘူး။ ၉၆ပါး ရောဂါဝေဒနာကင်းစင်နေသော်လည်း လူမှုရေးသုခ သူ့မှာ မပြည့်စုံပါ။ ထို့အပြင် သူ့ကိုဝိုင်းပယ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်အတန်းမြင့်နေသည့် Development Status ဟုမဆိုသာပါ။ စာနာစိတ် နည်းနေသေးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ၏။
ဘန်ကောက်မြို့မှ ပြန်လာတဲ့ ၁၅နှစ်အရွယ် ကျွန်တော့်သမီးက ဘန်ကောက်မှာ ယောက်ျားဘ၀မှ မိန်းမဘ၀သို့ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းထား သူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြဿနာမရှိဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မသိမ်ငယ်ရဘူးဆိုတော့ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ Development ဟာ မြင့်မားနေပြီဟု ကောက်ချက်ချမိပါသည်။
မကြာသေးမီက ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ‘ကျား’ဘ၀မှ ‘မ’ဘ၀သို့ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းသော ဦးရေအရေအတွက် အလွန်များနေပါသည်ဟု ရေးခဲ့ရာ စာဖတ်သူတချို့က ပြဿနာတွေတော့ များကုန်ပါပြီဟု စုတ်သပ်နေကြသည်ကို တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ တကယ်တော့ ‘ကျား’ဘ၀ကနေ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းလိုက်သော အရေအတွက် များလာခြင်းသည် ပြဿနာများလာခြင်း မဟုတ်။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းခြင်းများသာဖြစ်၏။
Problem များခြင်းမဟုတ်၊ Problem Solution များလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်လိင်မပြောင်းဘဲ ဒီအတိုင်းထားတော့ကော ၄င်းပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် ယောက်ျားစိတ်ပြန်ပေါက်မှာတဲ့လား။ ယောက်ျားစိတ်ပြန်မပေါက်သည့်အပြင် ယောက်ျားအင်္ဂါနှင့် မိန်းမစိတ်ဖြစ်နေပြီး ပြဿနာများတော့၏။ ပြဿနာကတော့ လိင်တူ ဆက်ဆံခြင်း (Homo Sex) နှင့် လူမှုရေးပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်၏။ ၄င်းတို့ကို M.S.M (Men who have Sex with Men) ဟုခေါ်ပါ၏။ M.S.M တို့၌ HIV ကူးစက်မှုအန္တရာယ်လည်း မြင့်မားနေတတ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် HIV ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသဖြင့် M.S.M ပေါင်းများစွာနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီး အသိအကျွမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူး ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ၄င်း M.S.M တို့သည် အပယ်ခံများဖြစ်ကြပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ကို ‘ဟား’စရာဟု ယူဆကြပါသည်။ တချို့ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် HIV ကူးစက်နှုန်းမြင့်မားအောင် လုပ်သူတွေထဲမှာ သူတို့လည်းပါတယ်ဟု အပြစ်တင်တတ်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ M.S.M များတွင် တချို့မှာ ချမ်းသာပြီး ကံထူးကြပါသည်။ ဘာကြာင့်လဲဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကျွန်တော်သိရသလောက် ဘုရားဖူးလိုလိုသွားပြီး ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းခဲ့ကြပါသည်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀ကို ကိုယ်ရောက်ရပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးလုံးလျားလျားတော့ မပျော်ရဲပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါတော့ မိန်းမလုံးလုံးဖြစ်ပြီဟေ့လို့ မကြေညာရဲပါ။ မိမိရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘ၀ကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပေါ်ပေါ်တင်တင် အသိမပေးရဲတာ ကျွန်တော်တို့ အသိမိတ်ဆွေထဲတွင် ရှိပါသည်။
တချို့က ပြောကြပြန်ပါသည်။ ‘ကျား’ ဘ၀မှ ‘မ’ဘ၀သို့ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းခြင်းသည် ဥပဒေအရ ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟု ဆိုကြပြန်၍ အပယ်ခံ M.S.M တို့ခမျာ သွေးလန့်ကြရှာပါသည်။ တပ်လိုက်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မက အကြီးကြီးမှ တကယ့်ကို အကြီးကြီးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇသတ်ကြီးခေါ် ပြစ်မှုဥပဒေ ၃၂၆တွင် လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုခုကို ပျက်စီးစေလျှင် ကျွန်းဒဏ်အထိ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဒီတော့ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ ကြီးကို ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်လိုက်တော့ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲဆိုပြီး ဒီပုဒ်မကြီးတပ်လိုက်တော့ သွေးပျက်ကုန်ကြရှာပါသည်။
#ကိုယ်အင်္ဂါကို ပျက်စီးစေခြင်းလား၊ ဆေးကုသခြင်းလား
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရန်ဖြစ်၍ ဒေါသအလျှောက် ဓားနှင့်ခုတ်လိုက်၍ တစ်ဖက်လူ လက်ပြတ်သွားသော် ကိုယ်အင်္ဂါပျက်စီး၍ ဒုက္ခိတဖြစ်သွား သဖြင့် ပြစ်မှုဥပဒပုဒ်မ ၃၂၆နှင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော် ဆီးချိုလူနာတစ်ယောက် ဆီးချိုအလွန်ပြင်းထန်ပြီး ခြောက်ထောက်အနာဖြစ်၍ ခြေထောက်ပုပ်သဖြင့် အသက်အန္တရာယ်ရှိ၍ ဆရာဝန်က ၄င်းခြေထောက်ကို ဖြတ်ရသော် ဒီကိစ္စက ကိုယ်အင်္ဂါကို ပျက်စီးစေခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်မမှတ်ဘဲ ဆေးကုသခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်၍ ပုဒ်မ ၃၂၆နှင့် အကျုံးမ၀င်ပြန်ပါ။
ဒီတော့ M.S.M တစ်ယောက်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ဖြတ်တောက် လိင်ပြောင်းရာ၌ ဤကိစ္စသည် ဆေးကုသပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်လဲနိုင် ပါသည်။ တကယ်တော့ ခွဲစိတ်လိင်ပြောင်းထားခြင်းကို တားမြစ်သော အထူးဥပဒမရှိသလို ခွင့်ပြုထားသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်လည်း မရှိပါ။ ဤအမှုကိစ္စမျိုးကို တိုင်ကြား တရားစွဲဖူးခြင်းမရှိ၍ စီရင်ထုံးလည်း မရှိသေးပါ။
တချို့သော ဥပဒေရေးရာ အငြင်းပွားမှုများတွင် ကိုးကားစရာ ဥပဒေရှာမတွေ့ဘဲ စီရင်ထုံးများကို ကိုးကားရပါသည်။ စီရင်ထုံးဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သော တရားရုံးချုပ်၏ စုံညီစုံရုံးကာ ဆုံးဖြတ်ပေးဖူးသော အမှုတစ်ခု၏ ဆုံးဖြတ်ပုံ (၀ါ) ဖြတ်ထုံး (၀ါ) စီရင်ထုံးဖြစ်ပြီး အောက်တရားရုံးအားလုံးက လိုက်နာပါသည်။ ဥပမာ - မြန်မာလင်မယားတို့၌ လင်က မယားကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပါးရိုက်သော် လည်း မယားကို ကွာရှင်းခွင့်ပြုရမည်ဟု အတိအလင်း တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိ၍ ပါးရိုက်ခံရသောမယားက တရားရုံးတွင် လင်မယားကွာ ရှင်းခွင့်တောင်းသော် တရားရုံးအမျိုးမျိုး၌ မတူညီသော စီရင်ချက်အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၁၉၆၈ ၌ ၁၉၆၈ တရားမ ပထမ အယူခံမှု အမှတ် ၁ တွင် ဦးမျိုးမြင့်နှင့် ဒေါက်တာခင်မေကြည် စီရင်ထုံး၌ လင်မယားကွာရှင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီး စီရင်ထုံးအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုစီရင်ထုံးကို ကိုးကား၍ နောက်အခါ လင်မယား ပါးရိုက်မှုဖြစ်သော် အောက်ရုံးအားလုံးက စီရင်ထုံးကို လိုက်နာ၍ ကွာရှင်းခွင့်ပေးရသည်။ ဒါက စီရင်ထုံး ဥပမာတစ်ခုပါ။
သို့သော် M.S.M တို့လိင်ပြောင်းခြင်း၌ ယနေ့တိုင် အမှုမဖြစ်သေးသဖြင့် စီရင်ထုံးလည်း မရှိသေးပါ။ M.S.M တစ်ယောက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် ၍ လိင်ပြောင်းသော် ဥပဒေအရ တကယ်ပင် မိန်းမဖြစ်သွားပြီလား။ ဥပမာ - လိင်ပြောင်းလိုက်သော M.S.M ဘ၀ကလာသူသည် ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့် ရှိ မရှိဟူသော ဥပဒေပြဿနာမျိုးရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် ဤကိစ္စမျိုး၌လည်း စီရင်ထုံး မရှိသေးပါ။
အပယ်ခံရသူတို့မှာ ဥပမာတချို့ကတော့ လိင်တူဆက်ဆံသူများ၊ ပြည့်တန်ဆာများ၊ အနာကြီးဝေဒနာသည်၊ AIDS ဝေဒနာသည် စသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြပါသည်။
တစ်ခါက WHO မှ HIV ပိုးရှိသူများကို စာနာကြည်ဖြူလက်တွဲကူရန် ဆောင်ပုဒ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပါသည်။ စာနာကြည်ဖြူကြခြင်းသည် Acceptance ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေးအားနည်းချက်ရှိသူများအား ၀ိုင်းပယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေသေးပြီး စာနာကြည်ဖြူလက်သင့်ခံသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဖွံ့ဖြိုးမှု ခြေတစ်လှမ်းတိုးလာသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သော လူမှုရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် လူမှုရေးအားနည်းသူများကို ပြစ်ပယ်လှောင်ပြောင်ခြင်း၊ ၀ိုင်း၍ “ဟား”ခြင်းမရှိတော့ပါ။
မကြာသေးမီက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် ရုပ်ရှင်မင်းသားငယ်လေးတစ်ယောက် လက်ထပ်တော့ သူ၏ သတို့သမီးအား ‘ကျား’ မှ ‘မ’ သို့ ဘ၀ပြောင်းထားသူပါဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က သတင်းလွှင့်ခဲ့သည်။ တချို့က ‘ဟား’သည်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်မဟုတ်တော့ ‘ဟား’လို့ မရတော့ဘူး။ သို့သော် တကယ်ဟုတ်နေကြတဲ့ M.S.M တွေခမျာ ဘယ်လောက်အဟားခံနေကြရရှာမလဲ။
တချို့က M.S.M များနှင့် ပြည့်တန်ဆာများသည် HIV/AIDS ပြန့်ပွားရေး၌ တရားခံစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်ဆိုပြီး ၄င်းတို့ကို အပြစ်တင်ရှုတ်ချ ကြပါသည်။ ဤသို့ အပြစ်တင်ခြင်းသည် HIV/AIDS ကာကွယ်ရေး၏ မှန်ကန်သောနည်းလမ်း(Right Method) မဟုတ်ပါ။ သူတို့အား စည်းခြားထားသော လူမှုရေးအတားအဆီး (Social Barrier) အားနည်းပါးစေလျက် ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ (ဥပမာ-ကွန်ဒုံး စသည်ဖြင့်)ကို အလေ့အထ အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သာ HIV/AIDS ကို တားဆီးရပါမည်။
“Development isaChange towards positive directions.” ဟု ဆိုပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် ကောင်းသောဘက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ် ပါသည်။ တချို့က အာကာသယာဉ်စီး၍ ကမ္ဘာတ်ပတ်မှ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဟု ထင်ကြပါသည်။ တကယ့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် အခန်းကဏ္ဍ Sector များစွာ ရှိပါသည်။အာကာသယာဉ်စီး၍ ကမ္ဘာပတ်နိုင်ခြင်းသည် သိပ္ပံနည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသာဖြစ်ပြီး ပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာ လူမှုရေးကဏ္ဍများ Social Sector များပါဝင်သည်။
အပယ်ခံများအတွက် စာနာလက်ခံလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းသည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လောလောဆယ်အခိုက်အတန့် မှာ လကမ္ဘာသို့ ဒုံးပျံစီး၍ မသွားကြသေးပါ။ သို့သော် M.S.M တို့၊ ပြည့်တန်ဆာတို့အတွက်တော့ စာနာသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ ယနေ့ပင် ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ထို့ကြော့် ယနေ့ပင် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။
နားလည်မှု၊ လေးစားမှုများပေးလျှင် အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိကြပေမည်။ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက် လာမည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ၏။
ရေးသားသူ - ဒေါက်တာ ထွန်းဝင်း
*** ဒေါက်တာထွန်းဝင်း - လိင်နှင့် ကျားမဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး (Sex and Gender Politics) စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၃ပါဆောင်းပါး။
မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ (ဦးမြစိန်၊ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ)
အေအိုင်ဒီအက်စ် ကာကွယ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ (ဒေါက်တာထွန်းဝင်း)
Labels: Legal Information, Political articles
ငှကျပြောသီးကြောကျကြော - ငှကျပြောသာကူပေါငျး - မုနျ့...
မိနျးမလြာအခှငျ့အရေး Gays Right နှငျ့ နိုငျငံတျောဖှ...
နယျမွအေသဈ မှာ လုပျငနျး တိုးခြဲ့ မယျဆိုရငျ.
စိတျကွှစိတျကဝြဒေနာခံစားနရေသူမြားရဲ့ အနားမှာ ဘယျလို...
PrEP ဆေးနဲ့ PEP ဆေးတို့ရဲ့ အဓိပ်ပာယျနဲ့ သုံးစှဲပုံ
စာအုပျတဈအုပျကို အကြိုးရှိရှိနဲ့ မှတျမိနအေောငျ ဖတျ...
မုနျ့ဦးနှောကျ - ထနျးသီးမုနျ့ - သာကူဟာလဝါ - မုနျ့လင...
Laptop တစ်လုံး ဝယျတော့မယျဆိုရငျ
ရာဇသတျကွီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄
" ရှနေနျးတျောတှငျးမှ အပြိုတျောလောက "
မုနျ့လုံးကွီးကွျော - MILO Pudding - ကျောပွနျ့စိမျး...